केटीहरुलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? हैट ! आगो नै बल्यो कलेजमा, चितवनको कलेजमा जे देखियो… (भिडियो) « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
केटीहरु केटाहरुको के कुराले आकर्षित हुन्छन ? अनि केटाहरु चाही केटीहरुको के कुरा मन पराउछन ? पोखराकी चर्चित प्रस्तोता निशा पन्थी यही प्रश्न लिएर चितवनको एउटा कलेजमा पुगिन । कलेजका बिद्यार्थीहरुले यो प्रश्नको यसरी जवाफ दिए कि तपाई सुनेर एक छिन पनि हाँसो रोक्न सक्नुहुन्न । यो प्रश्न मात्र होइन, युवा पुस्ताका जल्दाबल्दा बिषयमा निशाले कलेजका बिद्यार्थीहरु संग निकै रमाइलो गरेकी छिन ।
भिडियो छायाङ्कन हुदै गर्दा कलेजमा सिभिल इन्जिनियरीङ पढ्ने र इलेक्ट्रीक इन्जिनियरीङ पढ्ने बिद्यार्थीहरु बिच करीब झडप कै स्थीती समेत देखियो । सधै कार्यक्रममा कलेजका बिद्यार्थीहरुलाई नाच्न लगाउने निशालाई चितवनमा भने उल्टै बिद्यार्थीहरुले नाच्न लगाइदिए । कलेश शो को यो पछिल्लो इपिसोडले तपाईलाई भरपुर मनोरञ्जन दिनेछ । पुरा भिडियो हेर्नुहोस ः